Madaxweyne Xasan Sheekh oo dib ugu soo laabtay dalka “Dhageyso” – Radio Muqdisho
Madaxweyne Xasan Sheekh oo dib ugu soo laabtay dalka “Dhageyso”
Madaxweynaha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kaddib markii dalka Jabuuti uu socdaal gaaban ku tegay.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga uu hogaaminayo waxaa garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda.
Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo warfidiyeenada kula hadlay qeybta nasashada ee Garoonka Aadan Cadde ayaa tilmaamay in dalka Jabuuti uu kula kulmay wafdi uu hogaaminayay Madaxweynaha Maamulka Somaliland Mudane Axmed Maxamed Siilaanyo oo ay ka wada hadleen arrimo badan oo ku saabsan sidii loo dar dar gelin lahaa wada hadaladii u dhexeeyay labada dhinac.
Madaxweynaha ayaa xusay in shirka ay ka soo saareen bayaan ku aadan dhowr qodob oo lagu heshiiyay, isagoo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle uga mahadceliyay qaban qaabada kulanka.
Kooxda Heegan oo galabta afka ciidda u dartay kooxda LLPP Jeenyo “SAWIRRO”
Liverpool iyo Arsenal oo Breejo Ku Kala Baxay “SAWIRRO”